. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ည
မီးခိုးနံ့ရောနေတဲ့ လေက ညင်ညင်သာသာနဲ့ မြို့ပြညထဲ အတူ လိုက်ပါ မျောလွင့်နေသည် .. ကားမောင်းဆရာနှင့် စပယ်ယာတို့ရဲ့ စီစီညံညံအသံတွေလည်း အပါအ၀င် .. ကားကြီး အချင်းချင်း ကျော်တက်ဖို့ အပြိုင် အဆိုင် မောင်းနေကြသည် .. တနေကုန် အလုပ်ထဲ ပင်ပန်းလာသူအချို့ကလည်း ရှေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ မစဉ်းစားနိုင်ခင်မှာပင် အိပ်မက် မက်လို့ နေပြန်သည် ..
တချို့သော လမ်းထိပ်များတွင် ညနေဆိုင်လေးများဖြင့် စည်ကားနေသည် .. ပိုက်ဆံ ရှားပါးသည်ဟု မည်မျှပင် ဆိုစေကာမူ ဘီယာဆိုင်နှင့် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်များတွင်တော့ လူများ ပြည့်လျှက် ရှိကြသည် .. ဘီယာဆိုင်နှင့် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်များသည် ညဘက် မိုးချုပ်သည့် အချိန်မျိုးတွင် ကားလမ်းမနားထိတိုင်အောင် ခုံများခင်းလျှက် ရောင်းချကြသည် .. လူကြီး လူလတ် လူငယ် များသည် လမ်းဘေးနားကျကျတွင် နေရာယူလျှက် ပင်ပန်းမှုများကို ၀ါသနာပါရာ ဖြေဖျောက်ကြသည် ..
တနေရာတွင် ကျမ ငယ်စဉ်က စီးခဲ့ဘူးသော ဆိုက်ကားဆရာကြီး လူစောင့်နေသည် .. နောက် တနေရာတွင် ကျမ ငယ်စဉ်က စာတူတူ သင်ခဲ့ဘူးသော ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းမလေး တဦးလည်း လူစောင့်နေသည် ..
ဆိုင်ကြီးတချို့မှ သီချင်းသံ ဆူဆူညံညံများ ရောနှော အော်မြည်နေကြသည် .. လူငယ်တအုပ် အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် သီချင်းတပုဒ်ကို သံပြိုင် ဆိုသွားကြသည် .. တနေရာတွင် အရက်မူးသမားကြီးတဦး ရေချိန်မကိုက်သေးဘဲ ရစ်နေသည် .. တနေရာတွင် ပွဲစား အမျိုးသမီးကြီး တဦး စကားတွင်တွင်ပြောရင်း အတင်း အုပ်နေသည် ..
အမျိုးသမီးလေးနှစ်ယောက် စကားပြောနေသည် .. သူတို့ပြောနေတာက ဒီနေ့မီးလာမယ့် ရက်လား ဟူသတည်း .. ကျန်တယောက်က နောက် ၁၅ မိနစ်နေလျှင် ထပ်ပျက်လိမ့်ဦးမယ် ဟူသတည်း ..
စတိုးဆိုင်မှ အရောင်းဝန်ထမ်းမလေးတဦး ပစ္စည်း ၀ယ်သူကို မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်နေသည် .. ငွေရှင်းကောင်တာမှ မိန်းကလေးကတော့ မျက်နှာ ၈ခေါက်ချိုးဖြင့် ပစ္စည်းရောင်းနေသည် .. ၀ယ်သူမျက်နှာမှာတော့ စိတ်မသက်မသာ ရှိလှသည် ..
တချို့ အိမ်ရှေ့တွေမှာ အမျိုးသမီးကြီးများ ယပ်တောင် တဖျတ်ဖျတ်ဖြင့် ခြင်မောင်းလျှက် ရှိကြသည် ..
ထိုအချိန်တွင် ၁၅ မိနစ် ပြည့်ပြီထင့် .. မီးများ တပြိုင်နက် မှောင်ကျသွားလေသည် .. လူများအားလုံးတာဝန်ကိုယ်စီဖြင့် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းသူထွန်းကြသည် .. လက်နှိပ်ဓါတ်မီးရှာ၍ မီးအားမြှင့်စက် ပြေးချကြသည် .. မြည်တွန်တောက်တီး၍ မီးစက် ပြေးနှိုးသူ နှိုးကြသည် .. ကလေးများကတော့ ကစား မပျက် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 4/03/2010 12:59:00 AM